कुन राशिको मानिस एकान्त प्रेमी हुन्छन,प्राय एक्लै बस्न रूचाउँछन,तपाई कुन राशि?हेर्नुहोस – Khabar PatrikaNp
कुन राशिको मानिस एकान्त प्रेमी हुन्छन,प्राय एक्लै बस्न रूचाउँछन,तपाई कुन राशि?हेर्नुहोस
August 15, 2020 2073
मानिसको कुण्डलीमा ग्रह नक्षत्रको सिधा प्रभाव पर्छ । जसले उनीहरुको जिन्दगी प्रभावित हुन्छ । यहि नक्षत्रको आधारमा हरेक मानिसको राशि निश्चित हुन्छ । जसले उनीहरुको स्वभाव र भविष्यको संकेत मिल्छ । धेरै मानिसलाई भिडमा बस्न मन पर्छ भने केहि यस्ता मानिस नि हुन्छन् जो एक्लै बस्न रुचाउछन् । जान्नुहोस् कुन राशिको मानिसलाई मन पर्दैन भिड भाड:
१. मकर राशि: मकर राशि भएका मानिसलाई एक्लै बस्न मनपर्छ। यी राशि भएका मानिस अरुसंग घुलमिल हुन त्यति रुचाउदैनन्। किन कि यी मानिसको स्वभाव लजालु हुन्छ। यी राशिका मानिस आफुले पहिलादेखि नै चिनेको व्यक्तिहरुसँग बस्न रुचाउछन्।२. मिन राशि: एक्लै बस्नु यी राशी भएका व्यक्तिको सबै भन्दा ठुलो बल हो। यिनीहरु दिनमा पनि सपना देख्छन् र आफ्नै दुनियामा हराउछन्।
३. कर्कट राशि: यी राशि भएका व्यक्तिहरुको थोरै साथी हुन्छन् र उनीहरुसँग नै बस्न मन पराउछन्। कोहि नचिनेको व्यक्ति यिनीहरुको नजिक आए भने यी राशि भएका व्यक्तिले अप्ठ्यारो महशुस गर्छन।४. कन्या राशि: यी राशी भएका मानिस लजालु स्वभावका हुन्छन किनकि यो राशिमा ग्रह नक्षत्रको धेरै प्रभाब पर्छ । यिनीहरुलाई आफ्नै दुनियामा मस्त रहन मन पराउछन् । यी राशि भएका व्यक्तिलाई आफ्नो घर बाहेक अन्त बस्न मन पर्दैन ।
मे महिनामा जन्मने व्यक्ति=मे महिनामा जन्मने व्यक्ति आकर्षक र लोकप्रिय हुने गर्दछन्। यो महिनामा जन्मने व्यक्ति भिड्मा पनि पहिचान राख्ने खाले हुने गर्दछन्। किनकी यिनीहरुको आकर्षक व्यक्तित्वमा धेरै मान्छे लोभिने गर्दछन् र धेरै मानिसको ध्यान आफूतिर खिच्ने गर्दछन्। यिनीहरुमा त्याग गर्ने प्रवृत्ति हुने गर्दछ र यिनीहरु संघर्ष गर्ने खाले हुने गर्दछन्।यिनीहरुको फेसन पनि निकै आकर्षक मानिने गरिन्छ। प्रेमको मामिलामा यिनीहरु निकै पक्का हुने गर्दछन्। एक पटक कुनै व्यक्तिसँग प्रेम गर्यो भने उनीहरु त्यसलाई जीवनभर गरिरहने गर्दछन्। मे महिनामा जन्मने व्यक्ति आफ्नो प्रेमलाई लुकाएर राख्ने खाले हुने गर्दछन्।
Prevकुन राशिको मानिस एकान्त प्रेमी हुन्छन,प्राय एक्लै बस्न रूचाउँछन,तपाई कुन राशि?हेर्नुहोस
Nextफेरी हत्या, मेरो छोरालाई छातीमा चक्कुले रोपेर फनफनी घुमाए (हेर्नुहोस भिडियो)
कोरोना समुदायमा फैलदै गएपछि धमाधम सिल गर्दै स्थानीय तह………..
कोभिड-१९ का कारण विश्वभरि १० लाख मानिसको मृत्यु
दशैमा २५ हजार सक्रिय सङ्क्रमित भए पनि हुदैँन लकडाउन : मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतम
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (27995)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (21995)
उपचार नहुने रोगबाट ग्रसित १२ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई मार्नको लागि सरकारको अनुमति
सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएकाे जनगुनासो, मंसिर १ देखि वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न,मन्त्रिपरिषद्को निर्णय